Waraabe carruur cunay - Radio Ergo
Deegaanka Adhicadeeye oo 32 Km waqooyi galbeed ka xiga magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa la sheegay in 3dii bilood ee ugu danbeeyey uu waraabe ku cunay 3 carruur ah, kuna dhaawacay 5 ruux oo dad waaweyn ah kadib markii dadka deegaanku bilaabeen inay ugaarsadaan dhurwaaga oo ay aamineen in uu daawo u yahay cudrro dhawr ah.
Xaliimo Cabdi Aadan waa hooyo dhashay 4 carruur ah oo ah qoys xoolo dhaqato ah kuna nool baadiyaha tuuladaan, gabar 3 jir ah oo ay dhashay ayuu waraabe ka cunay 6-dii bishan June xilli fiidkii ah oo ay xooliha shaqadoodii ku hawlanayeen, Radio ergo ayey u sheegtay in 7:00 fiidnimo oo ay gabadha seexisay guriga ardaagiisa oo ay ninkeeda ka caawinaysay oo ku dhex jiray xerada ariga ay maqashay dhawaaqa gabadha yar kadibna ay arkeen dhurwaagii oo sii wata, aabihi ayaa cayrsaday anna qori ayaan soo qaatay waan ku riday laakiin wuu ii dhici waayey qorigii, waxaana geesaha i qabsaday sedex carruur ah oo kale oo aan dhalay oo meesha joogay daqiiqado kadibna waxaa soo noqoday carruurta aabahood oo fara maran markaas ayaana miyir igu danbaysay ayey tiri.
Waxay intaa ku dartay in dad gurmad ah ay uga yimaadeen tuulada Adhicadeeye waxayna so helaan qaar ka mid ah gabdha jirtkeedii wayna xabaaleen.
Cali Cabdi Aadan wuxuu la dhashay Xaawo, wuxuu Raadiyaha Ergo u sheegay in wiil uu dhalay oo 3 jir ah uu waraabe la tagay xilli habeen ah oo la hurdo, wuxuu intaa raaciyey in uu isku dayey in uu ka soo dhigo wiilkiisa dhurwaaga, balse dagaal socday muddo saacad iyo bar ah oo dhexmaray aabe Cali iyo waraabaha kadib dhurwaagii ayaa god la galay wiilkii asagana waxaa ka jabay tooshkii uu wax ku iftiinsanayey sidaas ayuuna dhurwaagii wiilki ku cunay.
Cabdixakiin Hurre Jibriil oo ka mid ah dadka ku nool Ari-caddeeye ayaa Ergo u sheegay in weerarada dhurwaaga ee dadka uu ku hayo ay bilaabatay 3 sano ee ugu danbeeyey kadib markii dadka deegaanku ugaarsi ku bilaabeen waraabaha oo ay aamineen in hilibkiisa iyo subbagiisa ay daawo u yihiin cudurro dhawr ah sida macaanka, xiiqda, jinka iyo dhiig-karka ayna dadku bilaabeen inay ugaarsadaan kadibna uu gadooday waraabuhu oo u biaalbay aargoosi.
Cabdixakiin Hurre Jibriil ayaa intaa ku daray in kiilada hilibka ah ama subagga waraabaha lagu kala iibsado lacaga u dhaxeysa 50 ilaa 150 dollar, caadiyan waraabaha oo aad ugu badan dooxda Nugaaleed ma ahayn mid dad qaad ah inta ay ka xasuustaan dadka deegaanku balse xoolaha oo kaliya ayaa lagu yaqiinay in uu cuno.